Translate Myanmar (Burmese) to Japanese | Multilang.space
translate Myanmar (Burmese) to Japanese, Myanmar (Burmese) to Japanese translations, Myanmar (Burmese) to Japanese Google Translate ,
မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား こんにちは、元気ですか
မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည် こんにちは、私の名前は
ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို 申し訳ありませんが結婚しています
ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ 今は何時ですか？
ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား? 私はあなたの携帯電話の充電器を借りることはできますか？
ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ? 私に飲み物を注文してください。
ငါ gluten မှမတည့်ဘူး 私はグルテンにアレルギーがある
ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။ あなたの上司に電話してください。